इच्छाकामनामा निर्णायक भूमिका रहेका कारण मेरो उम्मेदवारी : गुरुङ – Saurahaonline.com
इच्छाकामनामा निर्णायक भूमिका रहेका कारण मेरो उम्मेदवारी : गुरुङ
चितवन, १६ बैशाख । प्रताप गुरुङ ‘मौसम’ इच्छाकामना गाउँपालिका बने देखि नै सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा आएको नाम हो । पार्टी भित्र एक मात्र आंकक्षी भएपछि टिकटका लागि प्रतिष्पर्धा भएन ।अन्तत उहाँले टिकट पाउनुभयो ।
चितवनको साबिकको दारेचोक गाविस वडा ९ मा जन्मिनुभएका गुरुङ स्पष्ट वक्ता र नेतृत्व क्षमता भएको प्रभाव शाली यूवा नेताको रुपमा परिचित छ ।
श्री ज्ञान मार्ग उच्च मावि घ्यालचोक गोरखामा कक्षा ९मा अध्ययनरत रहदाँ देखि नै अखिल क्रान्तिकारीबाट राजनिति सुरु गरेका मौस २०५५ देखि ५८ साल सम्म माझ गाउँ मावि दारेचोकमा शिक्षक पेशामा आवद्ध रहनुभयो ।
त्यस पछि शिक्षक पेशा छाडेर तत्कालिन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको १० बर्षे जनयुद्धमा पुर्णकालिन भएर लाग्नुभयो । आन्दोलनकै क्रममा उहाँलाई ५८ सालमै ७५ दिन आर्मी हिरासत र १४ महिना जेलमा राखियो ।
त्यसपछि २०६० सालबाट पुन आन्दोलनमा सहभागि रहेका गुरुङ अहिले माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाका इन्चार्ज हुनुहुन्छ ।
अहिले उहाँ स्थानिय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र बाट अध्यक्षको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ,उहाँसंग सौराहा अनलाईनकर्मीले गरिएको कुराकानी
१, यस गाउँपालिकामा तपाईको उम्मेदवार के का लागि ?
–यस गाउँपालिकामा मेरो उम्मेदवारी मुख्य गरि यो समाजमा विद्यमान भष्ट्रचारको अन्त्य गरि समृद्ध समाज निर्माण र विकासका लागि हो ।
२, पार्टीका साथीहरुको त विश्वास जित्नुभयो, मतदाताको नि ?
–निश्चय नै मलाई मेरो साथिहरुले विश्वास र भरोसा प्रदान गर्नुभएको हो । अब मैले आम मतदाताहरुको विश्वास जित्नु पर्ने चुनौती आएको छ । मलाई विश्वास छ की विगत लामो समय देखि जनताको काममा अहोरात्र खटिएको छु । अहिले चुनावको बेला झुटो र मिठो कुरा गरेर जनता झुक्याउने काम गर्नु हुदैन र म गर्ने छैन । म केवल जनता जो सदियौँ देखि यो केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाद्धारा उत्पिडित छन् । उहाँहरुको अधिकार कार्यन्वयन र विकासका कामहरुलाई तादुरुकताका साथ अगाडी बढाईरहेको छु , बढाइरहन्छु । जसले गर्दा स्वतः जनताको मन जित्न सक्नेमा ढुक्क छु ।
३, अन्य प्रतिष्पर्धी पार्टीबाट आंकक्षी धेरै थिए तर माओवादी केन्द्रमा एकल आंकक्षी तपाई मात्र हुनुभयो र सजिलै टिकट पनि पाउनुभयो । के अरु योग्य नभएर हो की तपाईले सबैको मन जित्न सफल भएको हो ?
–यसको मुख्य कारण हाम्रो पार्टीको विधि र प्रकृयाको आधारमा संचालन हुन्छ भने अन्य पार्टीहरुमा अलि बढि लोकतन्त्रको नाममा अराजकता विकास भएको छ , त्यही अराजकता ती पार्टीहरुमा वाहिर व्यवहारमा देखा परेको छ । त्यस कारण अराजक पार्टी र नेतृत्वले सिंगो समाजको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन ।
४,स्थानिय तह अधिकार सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको विकासका योजना के के छन् र कसरी नेतृत्व गर्न सक्नु हुन्छ ?
–सर्वप्रथम त समाज रुपान्तरणको यो महान अभियानमा निरन्तर आवद्ध भष्ट्रचार मुक्त र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्ने काम नै प्रमुख रहने छ ।
“विकासको कुरा गर्नु पर्दा सबै गाउँमा सडक विस्तार गर्ने नयाँ बनेका सडक स्तरोन्ती गर्ने, रिग्दि खोलाको पानी जनातको लगानीलाई सार्थक बनाई विजुलीमा आत्म निर्भर र सस्तो महशुलमा जनतालाई प्रदान गर्ने, स्थानिय कच्चा पदार्थलाई ध्यानमा राखी उद्योग खानीहरु संचालन गरि यस गाउँपालिका भित्र रहेका वेरोजगार यूवाहरुलाई क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगार पदान गर्ने गर्ने छु” ।
साथै इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्यटकीय संभावना रहेको हुदाँ विशेष योजाना ल्याउने छु र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका नीजिकरण व्यापारीकरणको अन्त्य गरि सबै गरिब, दलित, किसान ,मजदुर, सुकुम्वासीका छोराछोरीहरुलाई निःशुल्क व्यवहारिक शिक्षा पदान गर्ने छु ।
“जहाँ सम्म छ नेतृत्वको कुरा ,म जनयुद्ध देखि नै यसै ठाउँमा राजनिति गरेर जनताको घरदैलोमा पुगेको कार्यकर्ता हुँ , म इच्छाकामना गाउँपालिकाका सबै जनता र सबै पार्टीका नेताहरुसंग परिचित छु” ।
मैले शान्ति प्रक्रियामा आई सकेपछि यहाँका स्थानिय अन्य पार्टीका नेतृत्वसंग धेरै काम गरिसकेके छु र निर्णायक भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएको छु । याहाँका अन्य दलका नेताहरुको मनोविज्ञान काम गर्ने शैली बारे म जानकार छु जसले गर्दा म अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेतृत्व गर्न सक्नेमा विश्वस्त छु ।